(MK-677 Powder) Ntuziaka Ntuziaka Ntuba Ntuziaka | Aarsraw sarms ntụ ntụ
(MK-677 Powder) Ntuziaka Ntuziaka Ntube
/blog/Ibutamoren , MK-677/(MK-677 Powder) Ntuziaka Ntuziaka Ntube
Ihe na 01 / 05 / 2018 by Mmmmmmmmmmmm dere na Ibutamoren, MK-677.
(MK-677 ntụ ntụ) Ntube ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
aasraw blog igodo
1.What bụ (MK-677 Powder) Powder Ibutamoren? 2. (MK-677 Powder) Nzuzo Na-enweghị Mmasị Uru Ndị Ukwuu
3 (MK-677 Powder) Mmetụta Na-emetụta Nda ntụ ntụ 4.Elee họrọ MK-677 ntụ ntụ?
5..How E Si Jiri Ntughari 6.Gịnị ka m kwesịrị iwe?
7.Gịnị ka ana akwadoro maka Bodybuilders? 8.MK-677 ntụ ntụ nkọwa:
9.Otu esi ewere MK-677 Liquid nke uzu uzuzu? 10.Buy Genius MK-677 Powder si AASraw
1.What's (MK-677 Powder) Powder Ibutamoren?
(MK-677 ntụ ntụ) Pukpu Ibutamoren bụ ọgwụ nke nwere ike imeziwanye ogologo ndụ, njupụta ọkpụkpụ, ikike nghọta, ike, na metabolism. A na-enyocha ya maka ọrịa Alzheimer, adịghị ike na ndị agadi, na ụkọ hormone na-eto eto.
MK-677 na-eji ndị na-eme egwuregwu eme egwuregwu asọmpi na egwuregwu. MK-677 jikọtara ya na ghrelin receptor, na-egosipụta mmetụta nke ghrelin. Ihe ndị a gụnyere gụnyere agụụ na-arịwanye elu, nkpọkọ nke ahụ, ọkpụkpụ ịnweta ọkpụkpụ, angiogenesis, VEGF okwu, nchedo obi, na modulation nke glucose na ike homeostasis.
A na-ekwukarị Ibutamoren na ntanetị online maka anabolic akwara-ewu ihe. Ọ dị n'elu mgbochi na ndị na-achọ ịmalite uto homone ha.
Otú ọ dị, ọmụmụ ihe ọmụmụ nke ụlọ ọrụ a dị ole na ole. Na ederede di n'okpuru, anyi ga eme ka ihe mara banyere ibutamoren di ugbu a.
Ibutamoren (nke a makwaara dị ka ibutamoren mesylate ma ọ bụ MK-677), na-akwalite skepụ nke hormone nke na-eto eto (GH) ma mee ka mkpụrụ ndụ insulin na-akpata 1 (IGF-1).
Ibutamoren na-eme ka ogo homone dịkwuo elu, site n'igosi ihe hormone ghrelin mere, ma jidesie otu n'ime ndị nabatara (GHSR) n'ime ụbụrụ. GHSR arụ ọrụ na-eme ka e nwee mmụba nke mmụba si ụbụrụ.
A na-ahụ GHSR na mpaghara ụbụrụ na-achịkwa agụụ, obi ụtọ, ọnọdụ, ụbụrụ, nchekwa, na cognition. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya na ibutamoren nwekwara ike imetụta ọrụ ndị a. Otú ọ dị, dị ka ọ dị ugbu a, nchọpụta ihe omimi na-akọwa nanị mmetụta ibutamoren nwere na agụụ - na dịka a na-atụ anya, dịka ghrelin, ibutamoren na-eme ka ọ dị elu.
Ihe dị ukwuu banyere ibutamoren bụ na ọ na - eme ka ogo homone dịkwuo elu na obere ma ọ bụ na abaghị uru na homonụ ndị ọzọ, dị ka cortisol. Cortisol na-egbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na-ebelata mmerụ ahụ, na-egbochi ịmụ ihe na ebe nchekwa, ọ naghị adịkarị mma ka ewelite hormone a.
2. (MK-677 Powder) Nzuzo Na-enweghị Mmasị Uru Ndị Ukwuu
Uru ahụ ike nke MK-677 na-ele anya na-ekwe nkwa. Mmiri hormone na-arịwanye elu na ịka nká, MK-677 egosipụtakwala n'ọmụmụ ihe, ebe a na-achịkwa ebebo iji weghachite 1 a.
Nke a bụ ụzọ dị omimi nke nyocha nke ogologo oge. Chọpụta ihe hommon, neurotransmitters ma ọ bụ akara ndị ọzọ na-adajụ na nká. Ọzọ, lee ma ọ bụrụ na iweghachite ọkwa na-agbanweghachi mmetụta nke ịka nká.
Mbụ nwere mmasị na MK-677 n'ihi na m na-enyocha mmekọrịta dị n'etiti ụra na uto hormone.
Tupu m atụle uru, mmetụta dị n'akụkụ, na usoro onunu ogwu nke (MK-677 Powder) Powder Ibutamoren, ka anyị kwadoo ma kwurịta hormone na-eto eto n'onwe ya.
1) Ntụle nke mbụ na-enyere aka rụọ Mkpụrụ
A na-ejikarị emebido eme ihe dị ka ihe anabolic, iji mee ka ahụ dịkwuo ụbụrụ na-eme ka akwara buru ibu. Ọ na-arụsi ọrụ ike ma nwee ike iburu ya otu ụbọchị. Ndị a niile bụ uru ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-akpali akpali stimulators.
Dịka e kwuru na mbụ, ibutamoren na-amụba ogo homone na IGF-1. Ma hormone nke na-eto eto na IGF-1, n'aka nke ya, na-eme ka ahụ ike, ike ahụ ike, ma belata anụ ahụ.
N'ime ụmụ nwoke na-ahụ maka ahụ ike, ọgwụgwọ ọnwa abụọ na ibutamoren na-amụba ụba, na-arịwanye elu ọnụ ọgụgụ metabolic (BMR).
2) Nke mbụ na-ebelata Mgbawa Ọkụ
N'ime ndị ọrụ afọ ofufo na-adịghị ahụ nri, ibutamoren gbanwere ụkọ protein na-eri nri, nke nwere ike ime ka ahụ ghara ịgwụ.
N'ebe ndị agadi nọ na-agbaji mgba, ibutamoren mere ka ọ dịkwuo ọsọ ọsọ, ike ahụ ike na belata ọnụ ọgụgụ nke ọdịda.
3) Nkwebeghi na-eme ka mmerụ ahụ mebiri
Mkpụrụ hormone nke na-eto eto (GH) na-eme ka ọkpụkpụ gbanwee ma mechaa ọkpụkpụ. Agbanyeghị, n'ihi ntụgharị ụba na-achị na isiokwu ndị ejiri hormone na-eto eto, ọkpụkpụ ọkpụkpụ nwere ike ibido mbido tupu ịbawanye. Ihu ọma, ọ na - ewe oge (> afọ 1) iji hụ njupụta ọkpụkpụ.
N'ime ụmụ nwoke na-enye onwe ha n'afọ ofufo dị mma, ibutamoren mụbara ụba ọkpụkpụ.
N'ebe ndị toworo eto, ibutamoren mụbaa ọkpụkpụ ọkpụkpụ, dị ka atụpụtara site na osteocalcin, akara nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ.
N'ime ụmụ nwanyị na-ebute n'azụ ndị inyom, ibutamoren mụbara ịdị arọ nke ịnweta ọkpụkpụ, nke na-enye aka eme kawanye ọkpụkpụ sie ike ma gbochie osteoporosis.
4) Ibu ụzọ mee ka ụra dịkwuo mma
Nnyocha e mere gosiri na n'ime ma ndị okenye ma ndị okenye, ibutamoren meziwanye mma ụra na REM (oge anya ngwa ngwa) oge ụra.
Ewezuga ihe omumu sayensi, enwere otutu akuko banyere ihe ndi ozo n'oru ura di iche iche, di iche iche n 'Intanet.
5) Nkwekorita Na-alụso Agadi na May Ka Ọ Dịkwuo Ogologo
Mmiri ahụ na-eto eto (GH) na-emepụta ihe na okpukpu ahụ na-adaba site na etiti oge ọ bụla.
N'ọmụmụ ihe nke ndị agadi, kwa ụbọchị ibutamoren mụbaara GH na IGF-1 ọkwa na ndị na-eto eto nwere ahụike na-enweghị nsogbu ọjọọ. A maara IGF-1 ka ọ nwee mmetụta bara uru na ogologo oge.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, ibutamoren weghachitere profaịlụ homone nke na-eto eto n'ozuzu obese.
6) Nke mbido Ka nwere Nootropic mmetụta
Ụfọdụ ndị na-eji ibutamoren eme ihe dị ka ihe nootropic n'ihi na ọ na-eme na onye na-anabata ghrelin, nke nwere mmetụta nchịkwa. Ị nwere ike ịgụtakwu banyere mmetụta ndị a na post na ghrelin. Otú ọ dị, Sayensị ka na-amụ ma ọ bụrụ na olee otú ibutamoren si emetụta arụmọrụ ime.
Uzo abuo abuo site na ibutamoren nwere ike ime ka onu aru di elu:
Ibutamoren na-emewanye IGF-1, nke a maara iji melite nchekwa na mmụta.
Ibutamoren na-emekwa ka oge ụra na-ehi ụra na mma ụra. Anyị ma na ụra dị oké mkpa maka ọrụ ezi uche dị mma.
Otu nnyocha gbara ajụjụ banyere mkpakọrịta IGF-1 na ọrịa Alzheimer, ma ma ibutamoren nwere ike inye aka. Nte ededi, ke ukpepn̄kpọ emi, ibutamoren ikenyeneke ufọn ke ntak emi mîdụhe Alzheimer ke otu owo.
7) Nke mbụ bụ Uru na-emeso Ọganihu Mwepụ nke Ọganihu
Ibutamoren nwere ike ime ka hormone na-eto eto, IGF-1, na IGFBP-3 nọ n'ọnọdụ ụmụaka na-eto eto homone. Ọzọkwa, a na-enweta mmetụta ndị a n'enweghị mgbanwe mgbanwe nke prolactin, glucose, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol ma ọ bụ insulin.
N'ime ndị GH-deficient, ndị ibutamoren mụbara IGF-1 na hormone nke na-eto eto, na-enweghị mgbanwe dị ukwuu na cortisol, PRL, na hormone thyroid. Otú ọ dị, a na-amụba insulin na glucose.
8) Nkwekorita nwere ike inye aka na ịgwọ ọrịa na nzụlite anụ ahụ
Mkpụrụ hormone nke na-eto eto na-eme ka anụ ahụ dịkwuo njọ ma na-agwọ ọrịa, yabụ ibutamoren nwere ike inyere ndị a aka.
Enwere akụkọ nke ibutamoren na-enye aka, mana ihe omimi sayensị adịghị.
9) Nkwekọrịta nwere ike inye aka na Hangovers
Nke a bụ ihe anecdotal, ma ndị mmadụ na-akọ na ịgwọ ọrịa na ibutamoren.
3 (MK-677 Powder) Mmetụta Na-emetụta Nda ntụ ntụ
Mmetụta utịp kachasị na-akpata ibutamoren bụ mmụba nke agụụ na ihe na-adịghị agafe agafe, ịdị nwayọọ na-erughị oke edema na mgbu muscle (R).
Ọtụtụ nnyocha na-akọ banyere mmụba nke ọbara glucose na-ebu ọnụ na ọnụ ọgụgụ nke insulin sensitivity (R, R).
Mmetụta ndị a dị ka ihe ndị a na-ahụ maka ndị nwere ogo hormone na-eto eto, karịsịa ihe mgbu na nkwonkwo insulin (R, R).
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọmụmụ na-akọ obere ma ọ bụ na ọ dịghị mmetụta ọ bụla, otu nnyocha gwụrụ n'ihi nsogbu ndị dị njọ. N'ime ndị agadi nwere eriri úkwù, ibutamoren buliri ọbara mgbali elu, glucose ọbara na HbA1c, na enwere nkụda mmụọ obi (R). Ndị ọrịa na-enwe nkụda obi obi mgbawa karịrị 80 ma nwee akụkọ ihe mere eme nke enweghị nkụda mmụọ.
Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ile nri gị carbohydrate ma chọpụta mgbe niile ọbara shuga na insulin na-ebute ibutamoren.
Dịka anabolic, ibutamoren kwesịrị izere ma ọ bụrụ na ị nwere kansa. Ma hormone ahụ na IGF-1 nwere ike ịkwalite uto ọrịa cancer.
4.Elee họrọ MK-677?
Idemamoren Powder aka MK-677 A na-erepịa ntụwụrụ na counter dị ka ngwaahịa na-arụ ọrụ n'ahụ, maọbụ dịka ọgwụ na-eme nnyocha ruo oge ụfọdụ ugbu a. SARM bụ ihe ọhụrụ dị ọhụrụ mere Mk-677 na-ere ahịa dị ka ndị dị otú a, mana ọ bụ n'eziokwu Ọ bụghị SARM. SARMS bụ ndị modulators na-anabata ihe na-etolite etrogen, nke site na omume ha na-eme otu ụzọ ahụ steroid si eme; naanị SARM na-ahọrọ ma na-elekwasị anya naanị ndị nabatara androgen. Ihe dị mma banyere SARM bụ ọ dị ka ịnara steroid dị jụụ n'enweghi mmetụta ọ bụla (ozugbo ọ bụla). Mmetụta utịp nke SARM bụ ihe amaghị ama, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịbụ ihe na-adịghị njọ ma mesịa dochie ndị steroid niile. Nke a na-ekwu, (MK-677 Powder) Powder Ibutamoren adịghị adabere ihe ọ bụla androgen na-enweta n'ime ahụ mmadụ, ya mere abụghị SARM. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ ka mma karịa a SARM, ma ọ bụ na klas zuru oke nke ya onwe ya.
MK-677 bụ ọnụ na-arụsi ọrụ ike, nke na-arụpụta ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ nke na-agbanyeghị na enweghị ike ịkọwapụ ya na Growth Hormone Releasing Peptide (GHRP-6). Nke a na-akpọkarị ghrelin hormone agụụ agụụ? Ghrelin etoju na-ebuwanye ibu tupu nri, na nsonaazụ nke ghrelin na MK-677 na-eme ka agụụ na-agụ gị. Nke a bụ nzuzu, ma omume ha na-elekwasị anya n'ọtụtụ mpaghara ụbụrụ dị mkpa maka itinye aka na metabolism. Yabụ, dị ka agonist ghrelin (ma ọ bụ GHRP-6), MK-677 na-arụ ọrụ ndị nnabata nke na-akwadebe ahụ iji zụlite, too, rụzie, ma na-arụ ọrụ. Nakwa ịkpata mmụba dị ukwuu na ogo hormone eto.
Mmiri hormone bụ ezigbo mmiri nke ntorobịa. Ọ na - eme ka ị dịkwuo ike, dịkwuo mma, ahụike, na - eme ka akpụkpọ ahụ na ntutu dị mma, na ikekwe ọbụna karịa. Ọ bụ ezie na enweghi ike ịmụ ihe na-amụba dị ka mmụba nke akpịrị na ndị okenye, ọ bụ ihe kachasị elu n'oge oge ndụ na ọganihu kachasị elu nke mmepe; ọbụna ihe ka mkpa bụ na a chọpụtala ka mma ịmị mma n'ahụ ndị nwere ọrịa Alzheimer. O doro anya na hormone nke na-eto eto bụ hormone na-eto eto na mmepe ahụ anyị, na-enye ihe mgbaàmà maka ahụ anyị iji too ma gbasaa; na-emepụta mkpụrụ ndụ ahụ ike ka ọ tozu ma wusie ike.
Ọkpụkpụ akwara na ụfụ abụba bụ ebumnuche bụ isi maka ọtụtụ ndị nwere mmasị na MK-677. Ọmarịcha akpụkpọ anụ na ntutu isi anaghị emerụ ahụ, mana nke bụ eziokwu bụ na MK-677 bụ nnukwu uto nke na-ahapụ ogige. O nwere ọkara ndụ nke 24, na-eme ka ọ rụọ ọrụ ruo ogologo oge, ma n'adịghị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke hormone na-ahapụ ogige MK-677 adịghị eme ka ọkwa cortisol dị elu.
Ibutamoren bụ otu n'ime SARMS kachasị ike na bara uru na ahịa. Maka ndị na-amaghị nke okwu a, SARM bụ ndị na-emepụta ihe na-eme mgbanwe na etrogen. Ndị ọgwụ ndị a na-enwe ike itinye aka nanị na ndị na-anabata etrogen na muscle. Nke a na-eme ka ha baa uru nke ukwuu na n'ọnọdụ ụfọdụ ka mma karịa steroid, n'ihi na ndị na-eme steroid na-ejikọta androgen nabatara ọkpụkpụ, akpụkpọ na akụkụ ahụ. Nke a nwere ike ibute mmetụta dịgasị iche iche, ebe ana-emekarị SARM enweghị nsogbu ọ bụla. Nhọrọ a na-eme ka ha dịkwuo na androgenic dịka 10: 1, ebe ntụle dị na testosterone bụ injectable bụ 1: 1. Maka SAR ndị a, enwere ike ịmepụta mmeghachi omume anabolic ka mma karịa mmetụta ndị na-eme ka androgenic dịka gynecomastia, bloating, ọbara mgbali elu wdg.
Ndị na-asụ ngọngọ SARM, dị ka Ostarine, LGD 4033 ma ọ bụ Ligandrol, ma ọ bụ YK11, na-enwekarị obi abụọ, n'ihi na ọ dị ka ọ dị mma ịbụ eziokwu. Ọ dị mma, ọ dị mfe ịnwale ma hụ maka onwe gị, ma ọ bụ lelee ọgbakọ ahụ na ọtụtụ akaebe na-ekwenye na ha dị irè Naanị ihu ala bụ na SARM adịghị ike dị ka ụbụrụ anabolic mgbe niile. Y’oburu na ichoro ibu oke anu, buru uzo ike ndi steroid di ike Anadrol 50, Dianabol, Deca Durabolin, Trenbolone, etc. Ndị a ga-eme ka ị ghọọ oke anụ. Mana SARM bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-achọ ka ha nweta àgwà dị elu, na-adabere na muscle mass n'ụzọ dịtụ. Onye nwere ike ịtụ anya ịnweta 10-15 pound nke ahụ ike n'ime ihe gbasara otu okirikiri (na-emekarị 4-5 izu). Achọghị ịkọcha uru ndị ịcha, bụ nke dị na ụfọdụ ọbụna karị.
Nke a bụ obere okwu mmeghe ka ị ghọta nke ụdị Ibutamoren bụ. Ma onyinye a bụ n'ezie pụrụ iche ma na-anọpụ site na SARM mara mma n'ụzọ dị mma.
5.Otu esi eji ya eme ihe
Iji MK-677 mee ihe dị mfe ma dịkwa mfe, n'ihi na ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye na enweghị usoro ọgbaghara ọ bụla dị mgbagwoju anya. Enwere ike iwere ya maka ogologo oge, ruo izu iri. Moderatebọchị na-agafe agafe bụ 10 mg. Fọdụ ndị na-ebuli ihe nwere ahụmahụ na-eji ọgwụ nke 25 mg na karịa. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji mgbakwunye ahụ maka oge mbụ. A na-ekwekwa ka ị gbanwee ọgwụ ahụ n'oge okirikiri. Ọ bụrụ n’echiche na ọgwụ ị na - a currentlyụ ugbu a esighi ike iji rụpụta nsonaazụ ị tụrụ anya, ị nwere ike ịbawanye ya ntakịrị wee hụ ma ọ nwere mmetụta dị ike karị. Na nke ozo, ikekwe ị nwere ike nweta otu nsonaazụ ahụ site na iji usoro onunu ogwu. Onye ọ bụla dị iche, mana usoro ọgwụgwọ 50 mg kwa ụbọchị na-arụ ezigbo ọrụ na ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya gburugburu akụkụ ahụ, ị ​​ga-ahụ na ọtụtụ ndị enwewo ihe ịga nke ọma na ijikọta Ibutamoren, Candarine na Andarine. Ejikọtara ọnụ, ngwaahịa ndị a na-etolite nnukwu mkpọchi. Mgbanwe dị ike nke ihe mgbakwunye atọ ndị a jikọtara ga-akwụsị izu 10. Ọ ga-adị gị mkpa iji 25 mg kwa ụbọchị nke Ibutamoren, 20 mg nke Cardarine na 25 mg nke Andarine. Nke a bụ usoro ndụ maka ndị toro eto karịa, ma o zuru ezu iji mepụta asọmpi dị mma nke nkwonkwo, vascularity na leanness.
6.Gịnị ka m kwesịrị iwe?
Ihe MK-677 na-atụ aro: 25 mgs-50 mgs
Ụfọdụ nchọpụta MK-677 na-egosi MK-677 na-atụ aro bụ 25 mgs-50 igwe ma ọ bụ ọnụ.
Nchịkwa nke MK-677 25 mg kpatara mmụba 60.1% na ogo IGF-1 na izu 6 na mmụba 72.9% na ọnwa 12. N'ime ụdị mmetụta dị iche iche gụnyere ọgwụgwọ, oge (ọnwa), randomization strata (usoro MMSE akara ≤20 vs> 20), yana mmekọrịta nke oge-oge, enweghị ọdịiche dị mkpa n'etiti ndị otu ọgwụgwọ na CIBIC-gbakwunyere. ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe site na akara akara akara na ADAS-Cog, ADCS-ADL, ma ọ bụ CDR-sob na-agafe ọnwa 12.
Njikere a na-ejikarị ejikarị eme ihe n'ụbọchị ọ bụla a na-atụ aro iji nye uru kachasị uru na mmetụta kacha nta bụ 25 mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ị ga - ahụ na erere ngwaahịa a ma ọ bụ ntụ ma ọ bụ mmiri mmiri si na 5 mg ruo 1000 mg ma ọ bụ karịa. Site n'inwe uzuzu siri ike, ị nwere ike kewaa nlezianya gị ma belata ha n'ime usoro ọgwụ 25 na-atụ aro kwa ụbọchị. Nke a ga-enyekwara gị aka ịchekwa ego na ngwaahịa ndị ọzọ nke na-abịa n'ụdị pill, dị oke ọnụ, ma ghara inye nkwekọrịta nke ịkụda ngwa ngwa dị mfe.
Ịṅụ ọgwụ gị otu ugboro n'ụbọchị dị mma ebe ọ bụ na ọkara ndụ nke Mk 677 Ibutamoren bụ 24 awa. Ọtụtụ ndị na-atụ aro na ị ga-ewere ọgwụ gị tupu ị lakpuo ụra n'ihi na mkpụmkpụ mbụ nke homone nwere ike ime ka ụfọdụ ndị nwee ike ọgwụgwụ. Nke a na-enwekarị mmetụta dị ukwuu nke hormone nke na-eto elu bụ nke mere ọ na-atụ aro ka ị were ọgwụ gị tupu ị lakpuo ụra ka i wee ghara inwe obi ụtọ mgbe ị na-eteta.
Ọ dị gị ogologo oge ị chọrọ ịhazi oge gị. Ụfọdụ ndị na-akọ na ntanetị na ha ewerela mgbakwunye maka otu afọ ma ọ bụ karịa ma gosipụta ihe ịrịba ama nke mmetụta ndị ọzọ. N'ihi ya, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji nwee ogologo ndụ ogologo oge ị nwere ike ịgba ọsọ Mk 677 Ibutamoren n'ihi na ogologo oge ịchọrọ n'enweghị nchekasị banyere mmepụta GH nkịtị ma ọ bụ mmepụta ihe nke pituitary gland. Maka ndị nwere nlezianya, ị nwere ike ịme ogologo oge gị gburugburu 12 izu mana enwere ike iji ya mee ogologo oge. Ọtụtụ ndị anaghị apụ apụ n'ihi na ha hụrụ ngwaahịa ahụ n'anya nke ukwuu.
7.Gịnị ka ana akwadoro maka Bodybuilders?
Ndị na-arụ ọrụ na-achọ ihe kachasị mma nke ga-enyere ha aka inweta ahụ ike na imeziwanye ọrụ ha. E nwere ọtụtụ puku ngwaahịa si ebe ahụ na-ekwu na ha na-enye ụfọdụ ụdị uru. Otú ọ dị, mmetụta pụrụ iche nke ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a bụ ihe ọtụtụ ndị chọrọ izere. Mmetụta ndị na-emekarị na nsogbu ndị metụtara ahụike ndị ọzọ na ngwaahịa ndị a gụnyere:
- Ọganihu bara ụba
- Ụcha isi
- Ọbara mgbali elu
- Ọtụtụ ndị ọzọ
Nke a bụ ebe Mk 677 Ibutamoren na-abata n'ihi na a na-enyocha ya na sayensị na ụlọ nyocha ụlọ ugboro ugboro. Mgbe ọtụtụ ọmụmụ na nyocha, nchoputa egosiwo na Mk 677 gosipụtara na ọ bụ otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị mma maka ahụ mmadụ; nakwa ọrụ ọ bụla ọzọ nke gụnyere ọzụzụ ọzụzụ.
Mk 677 Ibutamoren kachasị mma maka ịmalite ahụ maka na ọ gaghị emetụta gị testosterone ọkwa na ikike ọ bụla na ụzọ ọjọọ. Mgbe ị na-agbakwụnye mgbakwụnye a, ọ dịghị mkpa ịmechaa mpaghara PCT ma ọ bụ buru onye na-egbochi aromatase nke achọrọ maka ngwaahịa ndị ọzọ.
Ọzọkwa, mgbe ị na-a doseụ ọgwụ ọnụ, ị ga-amụba ntọhapụ nke homonụ uto na IGF-1 nke ewepụtara site na pituitary gland site na mgbatị GH siri ike maka awa 24 na-esote. Mkpụrụ osisi ndị a siri ike na-eme ka ahụ gị mepụta peptides na-ewepụta uto nke na-ahapụ n'ụzọ nkịtị kama ọgwụgwọ ọtụtụ ndị bodybuilders na-eji iji ọtụtụ injections nke hormone na-ahapụ peptides. Na Mk 677 Ibutamoren, a na-eji ọnụ ekwu okwu ma na-etopụta mkparịta ụka niile na-esote elekere 24 na-esote site na otu mkpụrụ ọgwụ.
N'iji ọkwa a dị elu nke bioavailability ọnụ, ọ dịghị achọ ihe ọ bụla a chọrọ ma ọ bụ naanị otu dose chọrọ iji nweta uru niile. Tupu nke a, ndị na-ahụ maka ozu na-eji HGH injections na gh peptide injections nke a ga-achọ iji na-eme ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Ị nwere ike ichetụ n'echiche na iru ala nke a bụ na mgbakwunye na nsogbu ahụ mgbe ị na-aga ebe ọ bụ na HGH na peptides chọrọ nchekwa refrigerated ọbụna mgbe ị na-eme njem.
Mgbe ingestion, ọ na - akpali akpịrị gọọmentị iji mee ka 12 gh pulsations. Iji nweta otu uru ahụ site na peptides, ị ga-agbanye GHRP-6 ma ọ dịkarịa ala 12 ugboro ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị iji nweta otu uru ahụ. Tụkwasị na nke a, a na-echekwa mgbakwunye a na ọnụ ụlọ okpomọkụ nke na-eme ka ọ dị mfe maka njem.
Kwa ụbọchị eji eme ihe, usoro ihe omimi nke homonụ ga-aga n'ihu na-arịwanye elu. Ka nke a mere, ogo ndị a dị elu ga-eme ka ahụ gị nwee ike ikpebi uru ole ị ga-enwe ike ịkwado. Ke adianade do, ibu ibu bụ ngwa ngwa na nke pụtara ìhè n'ụzọ dị mma na abụba anụ ahụ gbazee n'ụzọ dị mfe karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka onye na-ewere ya iji nweta 10 pound n'ime izu mbụ ha maka iji mgbakwunye ahụ.
Dị ka onye na-eme egwuregwu, àgwà ehi ụra dị oke mkpa dị ka ọrụ ị na-arụ mgbe niile iji rụzie ma gbakee. Enwetarala ya iji nye ezigbo mma ụra nke dị omimi ma gbasaawanye nke ọma n'ihi ụba mmepụta nke homone. Ọ bụghị nanị na ị ga-enwe mmetụta siri ike karị n'oge usoro mgbatị, ma ị ga-ahụkwa mmụba dị ịrịba ama na njigide nitrogen. N'ihi ya, ị ga-ahụ nkwalite nke ahụ dịka ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla, ntachi obi gị ga-adịwanye mma. A ga-enwekwa mmelite dị mma n'ahụ gị iji tinye akpụkpọ ahụ na ntutu.
8. (MK-677 Powder) Powder Ibutamoren Details:
Aha: Ibutamoren, MK-677, MK-0677, L-163,191, L163191, Nutrobal
Solubility: Mmiri, DMSO, Ethanol, Propylene Glycol
Uritydị ọcha:> 99%
Ebe na-agbaze agba: 170 - 172 Celsius
Nchekwa: na 20 ° C 2 afọ, belata ikuku ikuku, ụlọ ahịa na ebe dị jụụ
Ọkara ndụ: 24 awa
Ọdịdị: Gbanyụọ-acha ọcha iji belata ezi ntụ ntụ, hygroscopic, acrid isi, acrid metallic uto
9.Otu esi were Liquid (MK-677 ntụ ntụ) Pukpu Ibutamoren nke?
Iji mee ihe mmiri mmiri site na ntụ ntụ n'ihi na nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji tụọ usoro ahụ.
Iji mee ihe ngwọta 25mg / ml 30ml ị ga - achọ:
Gwakọta ya niile ma kpoo ya ruo mgbe o kpochapuru kpamkpam na ngwọta.
Ọ ga-atọ ụtọ dị ka ihe nzuzu mana ọ dị mfe iji ya.
Ịzụta beaker iko maka ịgwakọta na kpo oku na karama 30ml. Ime nke a na skwọm SARM ọ bụla mana tụọ ole MG dị mkpa ị chọrọ dabere na ole mg / ml ị chọrọ.
10.Genius Zụta MK-677 ntụ ntụ: zụta Powder Ibutamoren site na AASraw
1.Jaa kpọtụrụ anyị site na usoro ịjụ ajụjụ email anyị, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ na mbara igwe (CSR).
Nkowa gbasara ngwaahịa bara uru,Nabata ebe a
Tags: Zụrụ MK-677 ntụ ntụ, Ibutamoren ntụ ntụ, MK-677 ntụ ntụ
Uru nke iji MK-677 (Ibutamoren) uzuzu maka ozuzu
GW 501516 / Cardarine Basic information Ọnwụ ngwa ngwa ngwa ngwa: Ụdị ụdị ntụ ntụ na-adịrị gị mma?
AASraw nwere ike ibupu raw steroid dị ọcha na mbupu nchekwa.Welcome to contact with us soon!